२४ वर्षीय हार्दिकलाई हाईहाई, प्रधानमन्त्री मोदीलाई बाईबाई
प्रदेश, फिचर पोस्ट, विश्व
एजेन्सी, १९ मंसिर । राजनीतिमा उमेरको भूमिका के ? पछिल्लो समय विश्वमा नयाँ बहस सुरु भएको छ । नेपालमा तत्कालीन विवेकशील दलकी २१ वर्षीया नेतृ रञ्जु दर्शनाले उत्साहजनक मत ल्याएपछि नेपाली राजनीतिमा पनि राम्रै तरंग ल्याएको थियो । फ्रान्सको ३९ वर्षीय राष्ट्रपति हुन् वा अष्ट्रियाका ३१ वर्षीय राष्ट्रपति । चर्चा राम्रै पाएको छ । अहिले भारतमा पनि भएको छ यस्तै ।
डिसेम्बर ९ मा हुन लागेको भारतको गुजरात राज्यको विधानसभाको चुनावमा सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस लगायतका विभिन्न दलले चुनावी प्रचारप्रसारलाई तीव्र बनाएका छन् । आमसभा गरिरहेका छन्, र्‍यालीहरु निकालिरहेका छन् ।
मोदी आफ्नो पार्टी भाजपालाई जिताउन विभिन्न कार्यक्रमहरुमा सहभागी भइरहेका छन् । तर, मोदीका कार्यक्रममा मतदाताको अत्यन्त कम सहभागिता हुन थालेको छ । विगतमा असाध्यै उत्साहजनक उपस्थिति हुने मोदीको कार्यक्रममा नागरिक सहभागिता पातलिएसँगै प्रश्न उठ्छ, के यो समग्र राजनीतिप्रतिकै निराशा हो कि मोदीप्रतिको मात्र ? यो प्रश्नको उत्तर निर्वाचनपछिको मतपरिणामले देला तर, २४ वर्षीय नेता हार्दिक पटेलका भाषण सुन्न आउनेहरुको भीड बढेपछि भने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई राम्रै प्रहार हुन थालेको छ ।
‘डिसेम्बर तीनमा राजकोटमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको र्‍यालीको आयोजना गरिएको थियो । जुन गुजरातका मुख्यमन्त्री विजय रुपानीको गृहजिल्ला पनि हो,’ गुजरात राजकोटका पत्रकार कीर्तिसिंह जाला भन्छन्, ‘तर गएको हप्ता हार्दिक पटेलको र्‍यालीमा जति मान्छे आएका थिए त्यति मोदीको र्‍यालीमा आएका थिएनन् ।’ पत्रकार जाला दुबै र्‍यालीमा सहभागी भएर कार्यक्रमको तुलना गरेका थिए ।
जालाले अझ रोचक कुरा सुनाएका छन्, त्यो हो ‘हार्दिकको र्‍यालीमा आउने नागरिक आफ्नै पैसा खर्च गरेर आएका हुन् । तर प्रधानमन्त्रीको र्‍यालीमा सहभागी हुन आउनेहरुलाई आउन जानका लागि खर्च दिनु परेको थियो ।’
हार्दिक पटेल स्थानीय नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका सवालहरु उठाउँछन् । उनीसँग नैतिक धरातल पनि छ किनकी उनी सत्तामा छैनन् । उनीसँग कुनै आरोप जोडिएका छैनन् । हार्दिक पाटिदार अनामत आन्दोलन समितिमा अध्यक्षको भूमिकामा पनि छन् । उनलाई कांग्रेस आईले समर्थन गर्ने जनाएको छ । गुजरातमा लामो समयदेखि पटेल समुदाय विभिन्न मागसहित आन्दोलनरत छन् ।
हार्दिक जब किसान तथा नागरिकका समस्या तथा बेरोजगारी जस्ता मुद्धामा केन्द्रित भएर आफ्ना विचार व्यक्त गर्न थाल्छन्, उनलाई सुनूँ सुनूँ लाग्छ । उनी खासगरी ग्रामिण भेगका युवाहरुको समर्थनबाट उत्साहित छन् । जो निर्वाहमुखी खेतीपातीबाट वाक्कदिक्क छन्, हार्दिक उनीहरुलाई विकल्प दिनेबारेमा कुरा गर्दछन् ।
मोदी हिजोकै कुरा दोहोर्‍याइरहेका छन् । उनी सत्तामा छन् । उनले बोलेको कुरा लागू गर्न सक्छन्, उनलाई सपना बाँढेको सुहाउँदैन पनि । आइतबार हार्दिकले २५ किलोमिटर लामो रोड शो गरेका थिए, जहाँ उनले ६ वटा विधानसभा क्षेत्रको दौडाहा गर्न सके । तर, सोही दिन भरुचमा भएको चुनावी सभामा मोदी प्रमुख वक्तका रुपमा उपस्थित भए । तर सडक होइन, दर्शकको लागि राखिएको कुर्सी नै खाली भए ।
भारतीय जनता पार्टीका प्रवक्ता यमल व्यास मोदीको लोकप्रियता घटेको भन्ने तर्कसँग सहमत छैनन् । बीबीसी हिन्दीसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र हार्दिक पटेलको तुलना नै हुँदैन । नरेन्द्र मोदी भारतका सबैभन्दा ठूला नेता हुनुहुन्छ । उहाँको र्‍यालीमा सहभागी संख्याबाट हामी सन्तुष्ट छौँ ।’
-बीबीसी हिन्दीको सहयोगमा
२० वर्ष पुरानो फोहर बल्ल उठाइयो
कहाँ गए वडाध्यक्ष ?
व्यक्तिगत स्वार्थबाट माथि उठ्न जनप्रतिनिधिलाई मुख्यमन्त्रीको सुझाव
प्रदेश ७ मा ‘हेलो सिएम‘ कार्यक्रम शुरु
जनप्रतिनिधिहरुलाई जिम्मेवार र पारदर्शी हुन मुख्यमन्त्री पौडेलको अाग्रह
प्रदेश, प्रदेश ४, मुख्य समाचार
मसिना गाउँ शोकमा डुब्यो, चार बालिकाको एकैठाँउमा मृत्यु
मापदण्ड विपरीतका संरचना हटाउदैं महानगरपालिका
‘लगानीकर्ताको सुरक्षा ग्यारेन्टीका लागि प्रदेश सरकार तयार छ ‘
जोखिम बस्तीका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा घडेरी
सवारी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा समस्या
पाँच महिनापछि नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेता चयन
करेन्ट लागेर प्रहरीको मृत्यु
सिन्धुलीको नाकाबन्दीले जनजीवन अस्तव्यस्त
प्रदेश नं ३ लाई धुलोमुक्त बनाउँछौंः मन्त्री स्थापित
छुवाछुतको घटनामा मिलापत्र
सबै जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरु आन्दोलित
अध्यापन अनुमति पत्र प्राप्त नगरेका शिक्षकले पढाउन नपाउने
मोटरसाइकल दुर्घटनामा धिमालको घटनास्थलमै मृत्यु
फेरी देखापर्‍यो बर्डफ्लु